Ngabe abalingiswa bahlala bekhombisa lokho abazizwa khona ngokweqiniso? - Mytika Speak
Ikhaya / Abalingiswa Nezici / Ngabe abalingiswa bahlala bekhombisa lokho abazizwa khona ngokweqiniso?
Abalingiswa kaningi kukhombisa okuphambene nokuthi bazizwa kanjani. Abalingiswa bathonywe kakhulu ngumphakathi futhi bezwa isidingo sokwamukelwa emphakathini. Lokhu ngokuvamile kusho ukufihla indlela abazizwa ngayo ngokweqiniso ngezinto.
Lapho uzalwa, awunasidingo sokwamukeleka. Lokhu kuguquka njengabantu (umndeni, abangane, njll.) Bakutshele ukuthi kumele uziphathe kanjani ukuze wamukeleke emibuthanweni yabo. La mathonya omphakathi aqeqesha abantu ukuthi benze ngendlela ethile yokulingana emphakathini.
Ngomzamo wokwamukelwa ezinhlakeni ezehlukene zenhlalo, abantu abaningi ngokunganakile bakhetha ukukhombisa izingxenye ezahlukahlukene zabo ubuntu ukuthinta indlela umlingiswa wabo abonwa ngayo.
Fihla ifindo emphinjeni wami
Ukudalula ukuzethemba kwami
Ngiyethemba ukuthi ngizokwazi ukubhekana nakho
Ukuxhawulana okuqinile okunokuthula
Sula umjuluko entendeni yesandla sami
Ngeke ngilishaye leli thuba elikhulu
Ngiphasa ngamamaki amahle
Umbono wokuqala uhamba kahle
Ngifihle lo mshado
Yenza sengathi anginandaba
Amathegiizinhlamvu ukuqonda imizwa Ugqozi izinkondlo amathonya omphakathi umphakathi ingokomoya
Kuyini ukujika kwesiphetho?